10 ဥရောပမှာရှိတဲ့အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပမှာရှိတဲ့အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများ
သီးသန့်တည်ရှိမှု, 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အဆောက်အ ဦ, ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း, နှင့်တည်နေရာ, လာမည့် 10 အစက်အပြောက်ကအားလုံးကိုရပြီ. ဤ 10 ဥရောပရှိအားရလောက်သောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝနှင့်ဝိုင်းရံထားပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အရေးများနှင့်အတူပါရှိသည်.
1. ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်နေရာ: Provence
ကျောက်တုံးအိမ်များ, ရှေးဟောင်းပြင်သစ် villas, လှပသော Dentelles de Montmirail တောင်များ, Provence အဆိုပါတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ဥရောပရှိအများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းသောနေရာများ.
ပထမဦးစွာ, လာဗင်ဒါရနံ့နှင့်နိုးနိုးကြားကြားသစ်ပင်များမှချယ်ရီသီးများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် Provence တွင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်. ဒုတိယအ, သင်၏တိုင်းပြည်အိမ်၏ပြတင်းပေါက်များမှလှပသော Mont Ventoux ကိုနှစ်သက်ခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအားလပ်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မြင်ဖူးသမျှမည်သည့်အိပ်မက်မျှထက်မကပေ.
Provence ၌တည်၏, သင့်တွင်အားလပ်ရက်အငှားနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်: လယ်ယာမြေ, ဗီလာများ, နှင့်ချစ်စရာကောင်းအိမ်တွင်း. အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခအားလုံးသည်ကလေးများရှိသောမိသားစုများကိုလက်ခံရန်အတွက်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည်, သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းအုပ်စုများ.
မှ $136 တစ်ဘို့2အိပ်ခန်း $350 တစ် ဦး villa သည်, တစ်ည.
2. အီတလီရှိဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်း: Tuscany
Tuscan ဝိုင်ချိုင့်ဝှမ်းသည်အီတလီရှိအားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်. တောက်ပသောတောင်ကုန်းများသည်အားလပ်သောအားလပ်ရက်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Giglio ကျွန်း, သို့မဟုတ် La Verna ရှိ Franciscan ဘုန်းကြီးကျောင်း, လှပသော Tuscan ဒေသတွင်း၌ကြီးစွာသောထား - လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြသည်.
ထို့အပြင်, နံနက်ယံ၌ထ, Tuscany ၏လှပသောရှုခင်းများကိုတိုင်းပြည်လယ်ယာမြေမှထွက်ခွာခြင်း – အဖိုးမဖြတ်နိုင်. ဒီမှာ, သင်သီးသန့်ရေကူးကန်ဖြင့်ဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်နှင့်အေးအောင်ရွေးချယ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုခရီးစဉ်သွား.
Villas, တိုက်ခန်းများ, နှင့်အိမ်တွင်း.
$68 သို့ $200 တစ်ည.
ကလေးများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများ: အတိအကျ! လူကြီးများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဟန်ဆောင်နေကြသည်, ကလေးများသည် Pistoia သို့မဟုတ် Cavallino Matto ၏သတ္တဗေဒဥယျာဉ်များတွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည် အပန်းဖြေဥယျာဥ် in Livorno.
Grosseto to Train With Florence
တစ်ရထားနှင့်အတူ Grosseto မှ Perugia
Grosseto တစ်ရထားနှင့်အတူ Viterbo
ရောမ Grosseto တစ်ရထားနှင့်အတူ
3. ယူကေတွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အငှားနေရာ: အနောက်အင်္ဂလန်
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းရိုးတန်း, ကျောက်အိမ်, လှပသောနေဝင်ချိန်များ, နှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု, အနောက်တောင်အင်္ဂလန်ကိုအင်္ဂလိပ်ကျေးလက်တွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, အဆိုပါ ချစ်စရာကောင်းကမ်းရိုးတန်းမြို့များ နှစ်များအတွင်း Devon နှင့် Dorset တို့၏စွဲဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးအချိန်နှင့်ငန်သောလေများ၌ရဲရင့်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်.
ရွှေကမ်းခြေတလျှောက်လမ်းလျှောက်, ရှိမုန်ဟောငျးဟယ်ရီကျောက်ဆောင်လေးစား, ဒါမှမဟုတ် Jurassic ကမ်းခြေ, ရိုက်တယ် မည်သည့်အချိန်တွင်မြို့အားလပ်ချိန်. ဒီမှာနေနေစဉ်, မင်းကသမိုင်းမခေတ်ကနေမင်းကိုပြန်ပြီးခရီးသွားနေတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ် 17ကြိမ်မြောက် ရာစု. အင်္ဂလန်၏ဤအပိုင်းတွင်သဘာဝနှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်အကြောင်းပြောပြပါ, သက်ကယ်သို့မဟုတ်ရိုးရာကျောက်အိမ်များသည်အနောက်အင်္ဂလန်ရှိဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်, သငျသညျအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ်အားထက်သန်လျှင်, ဥယျာဉ်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ပုံပြင်များ – ထို့နောက်သင်သည်အင်္ဂလန်အနောက်၌ဥရောပ၌အားလပ်ရက်အငှားနေရာအချို့ရှိသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်.
$70- 320 တစ်ည
4. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းနေရာ: ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း
ကျော်နှင့်အတူ 10,000 နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ, အဆိုပါ ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း ဥရောပမှာအရမ်းကောင်းတဲ့အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုပါ. ဆွစ်တောင်တန်းများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတောင်တန်းကြီး, အကောင်းဆုံးအမြင်များပေးထားပါတယ်, ရှုခင်း, လမ်းကြောင်း, တောတောင်ရှုခင်း, စွယ်စုံအားလပ်ရက်ငှားရမ်းဂုဏ်သတ္တိများ, သင့်ရဲ့မေးရိုး drop လိမ့်မယ်.
Swiss Alps တွင်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးသောအရာတစ်ခုမှာအရသာနှင့်အုပ်စုအတွက်အိမ်တစ်လုံးရှိသည်. မိသားစုများအတွက်, သူငယ်ချင်းအုပ်စုများ, အပြင်ဘက်ရေပူစည်ပိုင်းနှင့်အတူ, ချစ်သူ, တောင်သို့မဟုတ်ချိုင့်ဝှမ်းအမြင် - ဆွစ်တောင်တန်းများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်မည်သူမဆိုအားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းဖြစ်သည်.
ဒါကြောင့်, ယခုသင်ရုံအကြားကောက်ဖို့ရှိသည် ချွတ် -The- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းသောနေရာများ Lucerne လိုပဲ, သို့မဟုတ်ရေတံခွန်များ၏ချိုင့်, မဂ်ဂိုးအိုင် (သို့) မမေ့နိုင်စရာအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးကိုသွားသောတောင်ပေါ်ရှုခင်းများ.
Chalets, သစ်သားတဲ, အိမ်များ, သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများ.
မှ $92 ရန်တိုက်ခန်းတစ်ခုအဘို့ $265 တစ် ဦး ချင်းစီ chalet သို့မဟုတ်ရေကန်အမြင်များနှင့်အတူအိမ်သူအိမ်သားအဘို့အညဥ့်အခါ.
ပြင်သစ်သည်ဥရောပရှိအားလပ်ရက်အငှားခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤမျှလောက်များစွာသောလှပပြီးစွယ်စုံသောနေရာများနှင့်အတူ, နောက်လာမည့်ပြင်သစ်အားလပ်ရက်အတွက်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုတည်းကိုသာရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ခက်ခဲသည်.
ဥပမာ, Biarritz သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများရှိသည်, Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တောင်နှင့်မြစ်မြင်ကွင်းများရှိသည်.
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းရာနေရာတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ပါ, သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်အငှားအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်နှင့်အတူ, နှင့်ပြင်သစ်၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသများရှိ.
Brittany မှာ, အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခအတွက်ရဲတိုက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်လှပသောကမ်းရိုးတန်းသို့သီးသန့်လမ်းကြောင်းရှိသည့်အိမ်တွင်းတစ်ခု.
$75 – $145 တစ်ည
ရထားနှင့်အတူ Tours မှ Nantes
Lille တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Tours မှ
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူပဲရစ်မှ Lille
6. ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိအားကောင်းသောအပန်းဖြေရန်နေရာ: Bohemia
Bohemian Switzerland သည်ဥရောပရှိခမ်းနားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. အံ့သြဖွယ်သဲကျောက်တောင်များနှင့် Elbe မြစ်၏ရှုခင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်, ချက်ဆွစ်ဇလန်သည်အားလပ်ရက်ပရဒိသုဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, ဥရောပတိုက်တွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒီနေရာမှာမော်ကွန်းအမြင်များပေးထားပါတယ်, အများအပြားတောင်တက်လမ်းကြောင်း, မိသားစု ပျော်ပွဲစားအစက်အပြောက်, နှင့်ရေကူးဖို့မြစ်.
ရိုင်းသောသဘာဝနှင့်နီးကပ်သောခေတ်သစ်အိမ်များ, နှင့်ဘဝ 100 နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ. Decin မြို့သည်သင်၏အိမ်ကိုအိမ်နှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ငှားရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်.
$90 – $150 တစ်ည
7. သြစတြီးယားတွင်အလွန်ကောင်းသောအပန်းဖြေရန်နေရာ: Styria
အရှေ့တောင်ဘက်သြစတြီးယားတွင်တည်ရှိသည်, Styrian Alpine ရှုခင်းသည်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏အလှပဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, Styria ဟာဥရောပမှာအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်: အမြင်များ, ရေခဲမြစ်, အစိမ်းရောင်ကျက်စားရာ, နှင့်သာယာလှပသဘာဝ.
အဆိုပါခမ်းနားအမြင်များနှင့်တောင်တက်လမ်းကြောင်းအပြင်, Styria ၌တည်၏, သင်တစ် ဦး အလည်အပတ်ပြီးနောက်လုံးဝအနားယူပါလိမ့်မယ် သဘာဝအပူစမ်း. တစ်နည်းအားဖြင့်, ပန်းသီးပင်များနှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်များစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, မင်းခေါင်းကိုချနိုင်တယ်, သို့မဟုတ်အရသာပျော်ပွဲစားပျော်မွေ့ပါ.
သစ်သားတဲ, ရေကန်နှင့်အတူဗီလာ, ချစ်သူ.
$65 – $200 တစ်ည
8. အားရစရာအားလပ်ရက်အငှားနေရာ: လန်ဒန်
London သည်ဥရောပတွင်အားလပ်ရက်အငှားအများဆုံးနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်စရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ဤတွင်သင်ထူးခြားလှပသောရပ်ကွက်များတွေ့လိမ့်မည်, ကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာနှင့်အတူ, ယဉျကြေးမှု, နှင့် Vibes. Notting Hill အိပ်မက်မက်သည်, Hampstead Heath ရိုးရာနှင့်အပွင့်သည်, နှင့် Kensington posh နှင့်ခေတ်မှီသည်. ဤရွေ့ကားအိမ်မှဝေးသင်၏နောက်အားလပ်ရက်အငှားကြိုတင်ဘွတ်ကင်များအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနေရာများသာအနည်းငယ်ဥပမာဖြစ်ကြသည်.
ထို့အပြင်, လန်ဒန်မြို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောမြင်ကွင်းများပေးထားပါတယ်, စျေးကွက်, ပြတိုက်, နှင့်အရသာနှင့်အားလပ်ရက်အမျိုးအစားများအတွက်ပန်းခြံများ. ထိုကွောငျ့, လန်ဒန်တစ် ဦး များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအနိုင်ရရှိလိမ့်မည် ကလေးတွေနှင့်အတူဥရောပ၌မိသားစုအားလပ်ရက်: အပန်းဖြေပန်းခြံများ, အကောင်းဆုံး pastry ဆိုင်များ, နှင့်သင်တန်းဟယ်ရီပေါ်တာ.
လန်ဒန်၏အလယ်ဗဟိုတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်, နှင့်လန်ဒန်အပြင်ဘက်နေအိမ်များ, depending on the zone.
9. ဂျာမနီနိုင်ငံရှိအပန်းဖြေအနားယူရန်နေရာ: Bavaria
Bavaria သည်ဂျာမနီရှိအလှပဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်နွေ ဦး ရာသီ၌. တောင်တန်းများမှအဲလ်ပ်တောင်တန်းမှသည်, ဂီတ, နှင့် Bavarian ခဲဖွယ်စားဖွယ်, လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာနှင့်အတူ, တစ်ဦး 10-Bavaria အတွက်တစ်နေ့ခရီး ဒီအံ့မခန်းဖွယ်ရာနေရာမှကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာအားလုံးကိုမွေ့လျော်ရန်မလောက်ပေ.
ထို့ကြောင့်, သင်သည် Bavaria ၌သင်၏အားလပ်ရက်အတွက်ကောင်းစွာကြိုတင်စီစဉ်ထားသင့်သည်. Bavaria သည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အပန်းဖြေခရီးထွက်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွား for ည့်သည်, အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခတွေကိုလအနည်းငယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်. နေရာထိုင်ခင်းဘွတ်ကင်အပြင်, သင်၏အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်, သင်ပြုလုပ်ရမည့်ထိပ်ဆုံးမြင်ကွင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစာရင်းကိုသုတေသနပြု။ ဖန်တီးပါ, နှင့်အထွေထွေခရီးစဉ်ရှိသည်.
Villas, တိုက်ခန်းများ, နှင့်အိမ်များ.
$80- $350 တစ်ည
10. အီတလီရှိအားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်း: ရေကန် Como
Como ရေကန်သည်အီတလီတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအားလပ်ရက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤအချက်ကိုကြည့်ရလျှင်နွေရာသီတွင်လူ ဦး ရေထူထပ်နိုင်သည်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသောရေကန်နှင့်တောင်ပေါ်ရှုခင်းများ, တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောလေထုနှင့်အတူ, အတွက်ရေကန် Como ထား၏ 10 ဥရောပရှိအများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းသောနေရာများ.
အကောင်းဆုံးအချိန် ရေကန် Como အတွက်အားလပ်ရက် မတ်လမှနိုဝင်ဘာလအထိဖြစ်သည်, ဇူလိုင် - သြဂုတ်လအနွေးဆုံးနှင့်အလုပ်အများဆုံးလများမှာ. ဒါကြောင့်, သင်၏သုတေသနကိုကြိုတင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. ထိုကွောငျ့, အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့တည်းခိုခန်းနေရာများနှင့်အားသာချက်များကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပြီး၊ ကန်ထဲမှာအားလပ်ရက်ငှားရမ်းခကိုကြိုတင်မှာယူရန်ဖြစ်သည်, ယခုနှစ်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်.
ဇိမ်ခံအိမ်များ, တိုက်ခန်းများ, ချစ်သူ, နှင့်အိမ်တွင်း.
$40 တစ်နေ့ $500 တစ်ပတ်ကို
Florence တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Como ရန်
မီလန်တစ်ရထားနှင့်အတူ Como ရန်
တစ်ရထားနှင့်အတူ Como မှတူရင်
တစ်ရထားနှင့်အတူ Como ရန်ဂျီနိုအာ
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ကျနော်တို့ခရီးစဉ်စီစဉ်ကူညီရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် 10 ဥရောပရှိအများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းသောနေရာများ. ဦး တည်ရာသို့ရထားဖြင့်သွားရန်နှင့်အိမ်မှဝေးသောအိပ်မက်လှလှသောအိမ်သို့အလည်အပတ်ခရီးသည်အမြန်ဆုံးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပ၌ 1o Awesome Vacation Rental Places” ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)